Wacaal Daray ah: Sacuudiga, Masar, Imaaraatka iyo Baxreen oo Xiriirkii u Jaray Qadar – Radio Daljir
Wacaal Daray ah: Sacuudiga, Masar, Imaaraatka iyo Baxreen oo Xiriirkii u Jaray Qadar
Juunyo 5, 2017 4:09 b 2
Afarta dal ee kore ayaa saaka xiriirkii dibloomaasi u jaray dawladda Qadar ayaga oo ku eedeyey “taageeridda xagjirka iyo ururo argagixiso oo caalami ah.” Ururka Akhwaanu Muslimiin ayaa Qadar si adag loogu eedeeyey in uu taageero dhinac kasta ah la garab taaganyahay.
Sacuudiga waxa uu Qadar ka mamnuucay cir, dhul iyo bad deegaanka Sacuudiga in Qadar ama hanti Qadar leedahay ka soo ag dhawaato.
Sidoo kale Imaaraadku waxa uu dibloomaasiyiinta Qadar u qabtay in ay 48 saac isaga baxaan dalkooda. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Imaaraadka WAM, Abu Dhabi waxay Dooxa ku eedeeysay “gacansiinta, garab-istaagga, iyo taageerida maaliyadeed ee ururada argagixisada iyo kuwa xagjirka ah” oo ka hawlgala dunida, siiba Bariga Dhexe iyo caalamka Islaanka.
Qadar waxaa tobankii sano ee la soo dhaafay lagu eedeeyey in ay dhanka maaliyadda iyo dibloomasiyadda ka taageeraan ururka al-Shabaab, una isticmaalaan ururka sidii gacan dibloomaasi oo kale oo ay ku fushadaan danahooda siyaasadeed.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shiikh Shariif Shiikh Axmed, oo huggaankiisii Maxkamadaha Islaamiga uu ururka Al-Shabaab ka soo farcamay ayaa hore ugu eedeeyey Dawladda Qadar in ay al-Shabaab si toos ah u taageeraan dhan kasta.
Qadar ayaa dhammaadka bishii May ku dhawaaqday in ay heshiis dhex dhigi doonto xukuumadda Farmaajo iyo ururka al-Shabaab. Madaxweyne Farmaajo wuxuu ahaa RW dawladdii Shiikh Shariif.
Daawo-Madaxweyne Farmaajo oo U Gacan Qaaday Askari Shacabka Ka Xigsadey
maxamuud axmed maxamed 3 years ago
qadar haday jirto inay dhab tahay
eedaymahaasi waa xaq in xiriirka loo jaro waayo waa carqalad amni
DrJamac Muxiyadiin 3 years ago
waxaan filayaa inay ka xumaadeeen in Somalida la heshiisiiyo k uwaasi waayo Awal hore bay sheegi lahaayeen.